प्रवासमा तड्पिंदै अलपत्र नेपाली कामदार, श्रममन्त्री भन्छन्– तत्काल फर्काउन सकिंदैन, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं सुरक्षित बस्नुस्
नेपाल फर्किन निवेदन दिंदै गैर कानूनी रूपमा कुवेतमा बसेका कामदार ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण बिचल्लीमा परेर नेपाल फर्कन चाहेका प्रवासी कामदारलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सरकार अहिलेसम्म कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदार कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण समस्यामा परेका खबरहरू आइरहेका छन्। कतिपय कामबाट निकालिएका छन्, कतिपयले तलब पाएका छैनन्। केहीले त खानेकुरा र खर्चको अभावमा भोकभोकै बस्नुपरेको छ।
हे.लिंक (के युएईले फर्काउला नेपाली कामदार ? कामदार भन्छन्, “भोकभोकै छौं, सरकारले वास्ता गरेन”)
बिचल्लीमा परेकाहरूले सरकारबाट सहयोग र उद्धारको पहल आशा गरे पनि त्यसको कुनै संकेत देखिएको छैन। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदार हालको अवस्थामा स्वदेश फर्किन नपाउने भएका छन्।
कुवेतका नेपाली कामदार ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बन्दाबन्दीको अवधिभर नेपाली कामदारलाई विदेशबाट फर्काउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारू हुन नसकेको र नेपालमा पनि बन्दाबन्दी भइरहेकाले तत्काल जस्तोसुकै समस्यामा परेका श्रमिकलाई पनि फर्काउन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखाका दीपकप्रसाद दाहाल भन्छन्, “बन्दाबन्दी खुलेपछि मात्र प्राथमिकताका आधारमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सकिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।” उनका अनुसार, समस्यामा परेका श्रमिकलाई कसरी फिर्ता ल्याउने, कहाँ राख्ने र सम्बन्धित जिल्लामा कसरी पठाउने भन्नेबारेमा छलफल शुरू भएको छ।
'उद्धारको काम बन्दाबन्दीपछि'
कोभिड–१९ का कारण विभिन्न मुलकमा रहेका श्रमिकमा दुई महीना अघिदेखि प्रभाव पर्न थालेको हो। समस्यामा रहेका श्रमिकहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो पीडा सुनाइरहे पनि सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गर्न त परको कुरा, सम्बोधन गरेर ढाडस दिन समेत बिर्सिरह्यो। श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बल्ल १७ वैशाखमा भिडियो मार्फत पहिलो पटक प्रवासी श्रमिकलाई सन्देश दिए।
भिडियो सन्देशमा मन्त्री यादवले कम्पनी बन्द भएका वा अन्य विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किन चाहेका कामदारले बन्दाबन्दीका कारण यातायातका साधन नचलेर फर्किन नपाएको बताउँदै आग्रह गरेका थिए, “यस्तो कठिन समयमा तपाईंहरू जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीं सुरक्षित रूपमा बस्न अनुरोध गर्छु।” हे.भिडियो–
मन्त्री यादवले समस्यामा परेका श्रमिकलाई कसरी फिर्ता गर्ने र त्यसबारे सम्बन्धित मुलुकसँग के कस्तो पहल गरिंदैछ भन्नेबारे भिडियोमा केही पनि बताएका छैनन्। यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ थियो, “बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि के कस्तो प्रणाली अपनाएर श्रमिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौं।”
मन्त्री यादव वैदेशिक रोजगारीमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको र तीमध्ये थोरैलाई मात्र पनि नेपाल फर्काउन र क्वारेन्टिनमा राख्न ठूलो खर्च चाहिने भएकाले मुलुकको क्षमताले थेग्न कठिन हुने बताए। “विभिन्न कारणले बिरामी परेका र शारीरिक रूपमा अशक्त भएकालाई ल्याउन पहिलो प्राथमिकतामा दिनेछौं”, उनले भने।
हे.लिंक (कोरोना महामारीः मलेशियामा नेपाली कामदार संक्रमणको जोखिममा, तलब नपाएकाहरु अलपत्र)
श्रम विज्ञ एवम् समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ श्रम मन्त्रालयका क्रियाकलाप हेर्दा अध्ययन र छलफल भइरहेको नाममा झारा टार्ने किसिमको भएको टिप्पणी गर्छन्। श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासको यस्तै व्यवहारका कारण कोभिड–१९ महामारीपछि समस्यामा परेका श्रमिकहरू विदेशमा अलपत्र परेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ।
डा. गुरुङ भन्छन्, “समस्या परेको समयमा श्रमिकको गुनासो सुनेर सेवा दिनुपर्नेमा यही वेला दूतावासले ढोका बन्द गरेर बसेको छ।”
हुन पनि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण कम्पनीबाट निकालिएर अलपत्र परेका श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित देशका दूतावासले शरण दिन वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
कुवेतबाट स्वदेश फर्किन निवेदन लेखाइरहेका नेपाली कामदार ।
सरकारले आपतमा परेका श्रमिकको सहयोगका लागि दूतावास मार्फत सम्बन्धित देशका रोजगारदाता वा सरकारसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्ने समाजशास्त्री गुरुङ बताउँछन्। “बन्दाबन्दीको बहाना बनाएर समस्यामा परेका श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउन नसक्नु गैरजिम्मेवारीपन हो, सरकारले भारत तथा खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्ने कामदारलाई गरेको व्यवहार भेदभावपूर्ण छ”, उनी भन्छन्।
श्रममन्त्री यादवले भने कामदार तत्काल ल्याउन नसके पनि बिचल्लीमा पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। विभिन्न मुलुकले आप्रवासी कामदारका लागि राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको र सम्बन्धित दूतावास मार्फत त्यस्ता सुविधाकोे लाभ लिन नेपाली श्रमिकलाई उनले आग्रह गरेका छन्। १७ वैशाखको भिडियो सन्देशमा उनले भने, “खर्चको अभावले खान र बस्न कठिनाइ भए सम्बन्धित दूतावासमा फोन गरेर वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सम्पर्क गरेर सहयोग लिन सकिन्छ।”
गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको सहयोगका लागि रु.५ करोडको कोष खडा गरेर त्यसमा सरकारले रकम थपी दूतावास मार्फत खर्च गर्ने विषयमा सरकारसँग प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पेश गरेको उक्त प्रस्तावमाथि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
सरकारले सहयोग रकमलाई सदुपयोग गरेर दुःख पाएका श्रमिकहरूको हकहितका लागि खर्च गर्न सक्ने भए पनि यसमा सरकार चुकेको समाजशास्त्री डा. गुरुङ बताउँछन्।
उद्धार कसरी गर्ने विषय छलफलमै !
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई फर्काउने सम्भावनाबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागसँग छलफल गरेको थियो। तर, छलफलपछि बन्दाबन्दी अवधिभर कामदार स्वदेश फर्काउन सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा पुगेको संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउँछन्।
गैरेले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन भएको र यस मार्फत श्रमिकले भोगेका समस्याबारे छलफल भइरहेको बताए। उनका अनुसार, विभाग र संघका पदाधिकारीको छलफलपछि समस्यामा परेका श्रमिकलाई तीन वर्गमा बाँडिएको र बन्दाबन्दी खुलेपछि त्यसैका आधारमा उद्धार गरिनेछ।
हे.लिंक (मलेशियामा नेपाली कामदारमाथि रोकिएन शोषण)
पहिलो वर्गमा अति विपत्तिमा परेका कामदारहरू छन्, जसमा गैरकानूनी रूपमा बसेका, श्रम सम्झौता सकिएका, भिजिट भीसामा गएर अपलत्र परेकाहरू पर्छन्। दोस्रो वर्गमा रहेका कामदारलाई सम्बन्धित देशको सरकारले स्वदेश पठाउनेछ। यस्तै, तेस्रो वर्गमा रोजगारदाताले हवाई टिकट दिएर छुट्टीमा नेपाल आउने कामदारहरू पर्छन्।
उद्धार गरिने कामदारको वर्गीकरण गरिए पनि समस्यामा परेकालाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खाका नै बनेको छैन।
संघका अध्यक्ष गैरे अन्य मुलुकभन्दा कुवेत र दुबईमा रहेका नेपाली कामदार बढी समस्यामा परेको बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यहाँ रहेका कामदारलाई खान र बस्नको समस्या छ। “कुवेतमा गैरकानूनी रूपमा बसेका घरेलु कामदारहरु बढी समस्यामा परेका छन्”, उनी भन्छन्।
कुवेत सरकारले गैरकानूनी रुपमा रहेका कामदारलाई विशेष प्याकेज मार्फत नेपाल फर्काउन तयार रहेको बताएको छ। तर, नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी नसकिएसम्म फिर्ता ल्याउन नसकिने बताउँदै आएको छ।
यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को मानव संसाधन मन्त्रालयले गएको ३० चैतमा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिममा रहेका श्रमिकहरू स्वदेश फर्कन चाहे पनि सम्बन्धित देशहरूले वास्ता नगरेको बताउँदै आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगे श्रम सम्झौता नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
यस्तै, दुबईमा भिजिट भीसामा गएका र श्रम सम्झौता सकिएका कामदारहरू समस्यामा परेका छन्। ती मुलुकमा महामारीको प्रभावका कारण कम्पनी बन्द भएको र सञ्चालक भागेपछि कामदारहरूको बिजोग भएको छ।
खाडी मुलुक बहराइनमा पनि नेपाली कामदार समस्यामा परेका छन्। त्यहाँ १७ बैशाखसम्म एक सय २६ नेपालीलाई कोभिड–१९ को संक्रमण भएको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार संक्रमित भएका कारण त्यहाँ अन्य नेपाली पनि त्रस्त छन्।
खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू र मलेशियामा गरी झण्डै १५ लाख नेपाली कामदार भएको आकलन छ। यीमध्ये तत्काल दुईदेखि तीन लाख कामदारले कोभिड–१९ का कारण स्वदेश फर्किन चाहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ।